Ihe kacha mma 24 Obi Ebumnuche Echiche Ebumnuche Maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Uche obi pụtara ịsọ oyi, agụụ na ịhụnanya. E nwere ihe ndị ọzọ dị na #heart na ihe ndị a sitere na ụzọ ha si anọchite anya ha. Ụzọ nke obi na-adọta pụtara ọtụtụ ihe nye onye na-ekiri anyị. Ụdị, ụdị na ụdị igbu egbu bụ ihe na-eme ka ọ dị egwu. Ị nwere ike iji ya kọọ akụkọ banyere ịhụnanya. Ihe omume okpukpe na-ejikwa obi na-eme ihe n'ihi na ọ dị egwu. Site na ọnụ ọgụgụ nke obi dịnụ na ihe atụ ahụ ọ na-anọchite anya, onye ọ bụla nwere ike iji ya. Ị nwere ike iji obi dị nso na omenala gị na -emepụta nkwupụta okwu siri ike n'ahụ gị.
Obi mkpịsị obi bụ ụfọdụ n'ime ihe kachasị mma ị ga-ahụ gburugburu. Ọ bụ obere na pụrụ iche. Ọ bụghị mmadụ niile ka ị na-ahụ ọnyà ndị a. Mgbe ị na-achọ ntụgharị oyiyi iji chọọ nnwere onwe gị na, egbu a bụ nanị otu iji gaa n'ihi ịma mma na mkpa. Ogbugbu obi abughi nani nani ma o di nma ile anya mgbe ana agbakwunye ya ozi. A na-agbakwụnye ube ya iji kọọ akụkọ.
1. Echiche echiche pụrụ iche na azụ
Ọbụbụenyi ga-adịru mgbe ebighị ebi! Enweghi ike igbusi ima-anyi bu ezi ihuma. Nke a bụ ihe mere egbugbere anya #heart aghọwo ihe a ma ama na gburugburu ụwa. Mgbe ị na-achọ igbu egbu dịka nke a, jide n'aka na ị ga-enweta ihe kacha mma #design maka onwe gị.
2. Mkpụrụ Obi Obi Ụtọ na apata ụkwụ
A na-eji obi eme ihe iji gosipụta ịhụnanya. Ọ aghọọ ndị a ma ama n'etiti ndị enyi, ndị enyi na ndị òtù ezinụlọ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-anụ ọkụ n'obi, njirimara egbu egbu ka zuru okè. Ị nwere ike ime ka igbu egbu egbu gị dị mma
3. Ogbugbu obi n'ubu
Ụdị dị ka nke a nwere ike ịmepụta n'akụkụ ọ bụla nke ahụ. Mgbe i nwere ya na akụkụ a nke ahụ gị, ọ naghị akwụsị ịchọ mma. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịchọta onye na - ese nkà nke ga - enyere gị aka na nhazi dị ịtụnanya.
4. Egbu egbugbu ima n'obi na azụ
5. Okpo egbuke egbuke na aka di na nwunye
6. Echiche egbu egbu n'obi n'akụkụ
Enweghi ihe di iche n'etiti nwoke ma obu nwanyị ma o bu ihe ndi a. Ụzọ mgbochi na-aghọ ihe ejiji ngwa ngwa bụ ihe mere anyị ji ahụ ndị ikom na ndị inyom dị njikere itinye aka na imewe dị ka nke a.
7. Eji egbuke egbuke na ogwe aka
I nweghị ike ịgọnahụ na njirimara igbu egbu adịghị mma. Mgbe ị na-egbu egbu dị ka nke a, ọtụtụ mmadụ ga-ele ya anya mgbe niile.
8. Uche obi tattoo echiche na ogwe aka
9. Ogbugbu obi #idea na nkwojiaka
Nke a bụ ihe mere ọtụtụ ndị ji eji ndị na-egwu ihe eme ihe ugbu a ka ha wee nwee ihe dị ịtụnanya dị ka nke a.
10. Akpanwu obi na-egbu egbu na ogwe aka
Na njedebe nke ụbọchị ị bụ onye onye ọ bụla ga-enyocha.
11. Okpo egbuke egbuke na aka di na nwunye
12. Ụda egbuke egbuke na aka
13. Echiche egbu egbu n'obi na nkwojiaka
Ojiji nke tattoos akwara aghọwo otu n'ime atumatu egbuchaputa a ma ama gburugburu uwa. E nwere atụmatụ obi mara mma nke a ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. isi iyi
14. Ogbugbu oke obi na ogwe aka
Mgbe ụfọdụ, anyị na-ahụ aha ndị agbakwunyere na tattoos ndị a iji gaa ọtụtụ kilomita na-agwa anyị na a na-akwachapụrụ egbu egbu maka onye. isi iyi
15. Eji egbugbere ọnụ mara mma na ogwe aka
Anyị nwere ike iji obi na-ekwurịta banyere mmekọrịta karịsịa n'etiti ndị hụrụ ma ọ bụ ndị mmekọ. Otú ọ dị, maka ndị na-edebanye aha ndị mmadụ na ya, anyị aghaghị ịdọ gị aka ná ntị. Ọ bụghị mmekọrịta ọ bụla ga-adịru mgbe ebighị ebi. isi iyi
16. Eche egbuogbu n'obi n'echiche
Iji nọrọ na nchebe, anaghị eji aha dịka ọ nwere ike ịbụ ihe ịma aka mgbe ị gbajiri ma ịchọrọ ime ka aha onye ahụ kwụsị. isi iyi
17. egbu egbu na-acha odo odo na ụkwụ
Ogbugbu ndị na-egbuke egbuke, ọ ga-esikwu ike ịzo mgbe obere egbugbu ahụ, ọ dị mfe ị zoo ha. isi iyi
18. akpiri obi mmadu azu n'apata apata
Ozi nke egbugbere obi gị nwere ike ịkọwapụta ya n'ụzọ zuru ezu na ụdị dị iche iche. Ozi bụ ihe ị ga - enye mgbe ndị mmadụ hụrụ gị abụọ. isi iyi
19. Echechi obi zuru ezu na ụmụ nwanyị
Ihe ọzọ ị ga-atụle bụ ebe ị ga-ahapụ egbugbu n'ahụ gị. Ị nwere ike ịchọ idebe ya maka naanị anya gị ma ọ bụ mee ka ọ meghee ya. Ihe niile dabere na ihe ịchọrọ ime. isi iyi
20. Akpanwu obi nwanyi na azụ
Ozi a na-agafe mgbe ị na-eji egbugbu egbugbu agaghị enwe ike ikwubiga okwu ókè nke bụ ihe mere ọtụtụ ndị ji eji ya eme ihe. isi iyi
21. Nwa nwanyi tattoo na afo
Anyị nwere obi dị nsọ, obi ekpuchi, obi agbawa na obi ndị nwere aha ụfọdụ na ya. isi iyi
22. Eke egbuke n'obi zuru oke n'obi
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ụdị obi dịka egbugbu, ị nwere ike ikwu maka okpukpe. Ụdị nkịtị bụ nke nwere ọkụ n'elu ya na ogwu gbara ya gburugburu. Ndị na-eji ya eme ihe na-esite n'okwukwe mgbe ụfọdụ. isi iyi
23. Akpanwu obi nwanyi na azụ
Obi ndị a kpochiri ekpuchi bụ maka ndị chọrọ ịmekọrịta mmekọrịta ogologo oge. Ọ dị nchebe karịa ndị nwere aha na ha n'ihi na ụjọ anaghị atụ egwu ịnwa ihichapụ aha ha ma ọ bụrụ na ihe na-agahie. isi iyi
24. Eke egbuke n'obi zuru oke n'obi
Obi gbawara agbawa maka ndị na-arịa ụfụ n'obi mgbe obi na-atụgharị aha na ha bụ otu ụzọ nke igosi na ịhụnanya dị ruo mgbe ebighị ebi. isi iyi
Pịa ebe a maka ndị ọzọ tattoo tattoo
Uche obiegbu egbu hennandị na-egbuke egbukeGeometric Tattoosarịlịka arịlịkazodiac akara akaramma tattoosokpueze okpuezeegbu egbu osisi lotusazụ azụmehndi imeweakpị akpịNtuba ntugharingwusi pusiudara okooko osisikoi ika tattooechiche egbugbuọdụm ọdụmỤdị ekpomkpaụmụnne mgbuenyí egbu egbudi na nwunyen'olu oluegbu egbu maka ụmụ nwokeEgwu ugoegbu egbu mmirienyi kacha mma enyiọnwa tattoosegbugbu maka ụmụ agbọghọndị mmụọ oziụkwụ akaaka akannụnụaka mma akaagbụrụ eboegbu egbu diamondAnkle Tattoosegbugbu egbugbuegbu egbu okpuna-adọ aka mmaakara ntụpọrip tattoosegbu egbu egbuna-egbu egbuegbu egbuegwu egwuaka akaakwara obiima ima mmaegbu egbu ebighi ebi